Ɔhene Nebukadnesar yɛɛ sika kɔkɔɔ honi (1-7)
Ɔkae sɛ obiara nsom ohoni no (4-6)
Wɔbɔɔ Hebrifo baasa no sobo sɛ wɔantie ɔhene asɛm (8-18)
“Yɛrensom w’anyame no” (18)
Wɔtow wɔn guu fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no mu (19-23)
Woyii wɔn fii ogya no mu anwonwakwan so (24-27)
Ɔhene no yii Hebrifo Nyankopɔn no ayɛ (28-30)
3 Ɔhene Nebukadnesar yɛɛ sika kɔkɔɔ honi bi a ne tenten yɛ basafa 60,* na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa 6.* Ɔde sii Dura asaasetraa no so wɔ Babilon mantam no mu. 2 Ɛnna Ɔhene Nebukadnesar somae sɛ wɔnkɔfrɛfrɛ ɔhene asoafo ne atitiriw ne amradofo ne afotufo ne afotosanfo ne atemmufo ne asɛnnifo ne amantam no so ahwɛfo nyinaa sɛ wɔmmra guabɔ a Ɔhene Nebukadnesar de rehyira ne honi so no ase. 3 Enti ɔhene asoafo ne atitiriw ne amradofo ne afotufo ne afotosanfo ne atemmufo ne asɛnnifo ne amantam no so ahwɛfo nyinaa behyiae sɛ wɔreba ohoni a Ɔhene Nebukadnesar rebehyira so no ase bi. Na wobegyinagyinaa ohoni a Nebukadnesar de asi hɔ no anim. 4 Na ɛsɛn* no teɛɛm denneennen sɛ: “Nkurɔfo, aman, ne nnipa a moka kasa horow, wɔreka akyerɛ mo sɛ, 5 sɛ mote abɛn, atɛntɛbɛn, sambuka sanku, sankuwa, sanku, atɛntɛbɛn kɛse, ne nnwonto nneɛma a aka no nyinaa nnyigyei a, mummutubutuw fam nsom sika kɔkɔɔ honi a Ɔhene Nebukadnesar de asi hɔ no. 6 Obiara a wammutuw fam ansom no no, ɛhɔ ara, wɔbɛtow no ato fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no mu.”+ 7 Ɛno nti, bere a nkurɔfo no nyinaa tee abɛn, atɛntɛbɛn, sambuka sanku, sankuwa, sanku, ne nnwonto nneɛma a aka no nyinaa nnyigyei no, nkurɔfo, aman, ne nnipa a wɔka kasa horow no nyinaa butubutuw fam, na wɔsom sika kɔkɔɔ honi a Ɔhene Nebukadnesar de asi hɔ no. 8 Saa bere no, Kaldeafo bi bae bɛbɔɔ Yudafo no sobo.* 9 Wɔbɛka kyerɛɛ Ɔhene Nebukadnesar sɛ: “O ɔhene, nya nkwa daa. 10 Ɔhene, wo na wohyɛɛ mmara sɛ onipa biara a ɔbɛte abɛn, odurugya, sambuka sanku, sankuwa, sanku, atɛntɛbɛn, ne nnwonto nneɛma a aka no nyinaa nnyigyei no, ommutuw fam nsom sika kɔkɔɔ honi no; 11 na nea wammutuw fam ansom no no, wɔde no bɛto fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no mu.+ 12 Yudafo bi wɔ hɔ a woayi wɔn sɛ wɔnhwɛ Babilon mantam no so. Wɔn ne: Sadrak, Mesak ne Abednego.+ Ɔhene, saa mmarima yi mmu wo. Wɔnsom w’anyame, na sika kɔkɔɔ honi a wode asi hɔ no nso, wose wɔrensom no.” 13 Ɛnna Nebukadnesar bo fuwii denneennen, na ɔkae sɛ wɔnkɔfa Sadrak, Mesak ne Abednego mmra. Enti wɔkɔfaa mmarima yi baa ɔhene anim. 14 Na Nebukadnesar bisaa wɔn sɛ: “Sadrak, Mesak, ne Abednego, ɛyɛ ampa sɛ monsom m’anyame,+ na sika kɔkɔɔ honi a mede asi hɔ no nso, muse morensom no? 15 Afei, sɛ moayɛ krado sɛ mote abɛn, odurugya, sambuka sanku, sankuwa, sanku, atɛntɛbɛn, ne nnwonto nneɛma a aka no nyinaa nnyigyei, na mubebutuw fam asom ohoni a mayɛ no a, ɛnde me ne mo nni asɛm. Na sɛ moansom no a, ɛnde ɛhɔ ara, wɔde mo begu fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no mu. Na onyame bɛn na obetumi agye mo afi me nsam?”+ 16 Ɛnna Sadrak, Mesak, ne Abednego buaa ɔhene sɛ: “O Nebukadnesar, enhia sɛ yɛma wo mmuae biara wɔ asɛm yi ho. 17 Sɛ ɛba no saa a, yɛn Nyankopɔn a yɛsom no no betumi agye yɛn afi fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no mu, na obetumi agye yɛn afi wo nsam, O ɔhene.+ 18 Na sɛ amma saa mpo a, ɔhene, yɛpɛ sɛ wuhu sɛ, yɛrensom w’anyame no, na sika kɔkɔɔ honi a wode asi hɔ no nso, yɛrensom no.”+ 19 Na Nebukadnesar bo fuw Sadrak, Mesak, ne Abednego denneennen maa n’anim* sesae koraa. Na ɔkae sɛ wɔmma fononoo no mu nyɛ hyew mpɛn ason nkyɛn sɛnea wɔtaa yɛ no no. 20 Na ɔka kyerɛɛ mmarima ahoɔdenfo bi a wɔka n’asraafo no ho sɛ wɔnkyekyere Sadrak, Mesak, ne Abednego, na wɔnkɔtow wɔn ngu fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no mu. 21 Enti wɔkyekyeree mmarima yi bere a na wɔn ntama, wɔn ntaade, wɔn abotiri, ne wɔn ho ntaade foforo da so hyehyɛ wɔn, na wɔtow wɔn guu fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no mu. 22 Esiane sɛ na ɔhene asɛm no mu yɛ den paa, na fononoo no mu ayɛ hyew aboro so nti, mmarima a wɔde Sadrak, Mesak, ne Abednego kɔe no mmom na ogyaframa no kunkum wɔn. 23 Na mmarima baasa yi, Sadrak, Mesak, ne Abednego de, wɔhwehwee fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no mu bere a na wɔakyekyere wɔn. 24 Ɛnna Ɔhene Nebukadnesar koma tui, na ɔyɛɛ ntɛm sɔree. Na obisaa ɔhene mpanyimfo no sɛ: “Ɛnyɛ mmarima baasa na yɛkyekyeree wɔn tow wɔn guu ogya no mu?” Wobuaa ɔhene sɛ: “Ɛyɛ ampa, O ɔhene.” 25 Ɛnna ɔkae sɛ: “Hwɛ! Mihu mmarima baanan a wɔnenam ogya no mu. Wɔnkyekyeree wɔn, na wɔn ho ntɔɔ kyima, na nea ɔto so anan no te sɛ anyame no ba bi.” 26 Na Nebukadnesar bɛn fononoo a ogya redɛw brambrambram wɔ mu no ano. Na ɔkae sɛ: “Sadrak, Mesak, ne Abednego, Ɔsorosoroni Nyankopɔn no+ nkoa, mumpue mmra!” Na Sadrak, Mesak, ne Abednego pue fii ogya no mu bae. 27 Na ɔhene asoafo ne atitiriw ne amradofo ne ɔhene mpanyimfo a ahyia hɔ no+ hui sɛ ogya no anyɛ wɔn nipadua hwee;*+ wɔn ti nwi baako mpo anhyew, wɔn ntama nso, sɛnea na ɛte ara na na ɛte, na na wusiw biara nnyee wɔn ho.* 28 Ɛnna Nebukadnesar kae sɛ: “Ayeyi nka Sadrak, Mesak, ne Abednego Nyankopɔn+ a wasoma ne bɔfo ama wabegye ne nkoa no. Wɔde wɔn ho too no so, na wɔantie ɔhene asɛm. Ná wɔayɛ krado sɛ wobewu* sen sɛ wɔbɛkotow anaa wɔbɛsom onyame bi aka wɔn ankasa Nyankopɔn no ho.+ 29 Ɛno nti, merehyɛ mmara sɛ, nkurɔfo, aman, ne nnipa a wɔka kasa horow nyinaa, obiara a ɔbɛka asɛm bi atia Sadrak, Mesak, ne Abednego Nyankopɔn no, wobetwitwa ne mu asinasin, na wɔadan ne fi amansan agyananbea,* efisɛ onyame biara nni hɔ a obetumi agye onipa sɛ oyi.”+ 30 Na ɔhene maa Sadrak, Mesak, ne Abednego dibea kɛse* wɔ Babilon mantam no mu.+
^ Bɛyɛ mita 27 (anm. 88). Hwɛ Nkh. B14.
^ Bɛyɛ mita 2.7 (anm. 8.8). Hwɛ Nkh. B14.
^ Obi a ɔyɛ adwuma wɔ ahemfi. Ɔtaa bɔ dawuru, na ɔma guabɔ ase tɛm dinn.
^ Anaa “betwaa asɛm too Yudafo no so.”
^ Anaa “ne suban.”
^ Anaa “annya wɔn nipadua so tumi.”
^ Anaa “ogya ho hua nni wɔn ho.”
^ Anaa “wɔde wɔn nipadua bɛma.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “sumina.”
^ Nt., “ɔhene maa Sadrak, Mesak, ne Abednego dii yiye.”